Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online APK Download - Free Shopping APP for Android | APKPure.com
Home » Shopping » Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online
Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online APK
Using APKPure App to upgrade Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online, fast, free and save your internet data.
The description of Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသုံးပြုသူ သန်းပေါင်းများစွာရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော Ads.com.mm ကို လာရောက်လေ့လာ အသုံးပြုလိုက်ကြပါစို့။ ပစ္စည်းအသစ်/အဟောင်းများကို ရောင်း/ဝယ်နိုင်ပြီး ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူတို့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သည့် Ads.com.mm ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါစို့။
✔ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (မြန်မာ နှင့် အင်္ဂလိပ်)
✔ Ads.com.mm website သည် အသုံးပြုသူများအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
✔ လူကြီးမင်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသောကြော်ငြာကို website ပေါ်တွင် အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျွန်တော်တို့ Ads.com.mm website မှ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဝယ်ယူလိုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို တွေ့ရှိရပါမည်။
✔ အရေအတွက် တစ်သောင်းကျော်မက အသစ်စက်စက်ပစ္စည်းများနှင့် တစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းများတချို့ကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့၏စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
✔ ရောင်းလိုသူဖြစ်စေ၊ ဝယ်လိုသူဖြစ်စေ တင့်သင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်း/ဝယ် နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
✔ ကျွန်တော်တို့ Ads.com.mm website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကြားခံလူမလိုအပ်ဘဲ သန်းပေါင်းများစွာသော ရောင်းလိုသူ၊ ဝယ်လိုသူများ အချင်းချင်း မိမိနီးစပ်ရာဒေသများမှ ချိတ်ဆက်ြပီး ဆက်သွယ်၍ ရောင်း/ဝယ် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Ads.com.mm ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အောက်ပါကဏ္ဍများ ရောင်းဝယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Toyota, Honda, Nissan, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Mercedes Benz, Daihatsu, Hyundai, KIA အစရှိသော ကားအမျိုးအစားများ၊ Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Piaggio, Vespa, Harley Davidson, Triumph, Ducati အစရှိသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစားများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း အမျိုးမျိုး (iphone, Samsung, Nokia, HTC, Blackberry, Sony)၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး (Television, Radio နှင့် အခြားပစ္စည်းများ)၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ကင်မရာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ဘီးအမျိုးမျိုး၊ ဖက်ရှင် အဝတ်အထည် နှင့် ဖိနပ်အမျိုးမျိုး၊ ကလေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခရီးသွားလာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အစားအသောက်များနှင့် အခြားသော ကဏ္ဍများစွာပါဝင်သော…
ကဏ္ဍစုံ အခမဲ့ ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် Ads.com.mm မှတဆင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ပစ္စည်းအသစ်/အဟောင်းများကို အရောင်းအဝယ်အတွက် အသုံးပြုဖူးပြီး ကြပါသလား?
Ads.com.mm ကိုသုံးကြည့်ပါ ! ရောင်းသူ နှင့် ဝယ်သူတို့ စိတ်ကြိုက်ဈေးညှိနှိုင်းကာ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါပြီ !
Come and join millions of users in Myanmar to sell and buy second-hand items without middlemen. Find out and try ads.com.mm – the leading sell-buy site in Myanmar!
✔ Available in2languages (Myanmar & English)
✔Easy: the process is very easy with intuitive user interface.
✔ Fast response: post your ad, and if it is approved your ad will interest thousands of potential buyers.
✔ Many choices: over 10.000 second-hand and new items available with very good quality.
✔ Best price: whether you areabuyer oraseller, you will get the best price.
✔ Without middlemen: do not sell or buy through middlemen, ads.com.mm will connect you with millions of private users nearby your location.
Ads.com.mm is the best site to sell and buy these categories: cars (Audi, Bentley, Cadillac, Cherry, Chevrolet, Daewoo, Dodge, Ferrari, Ford,Hummer, Isuzu, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Mazda, Mini, Subaru, Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Mercedes Benz, Daihatsu, Hyundai, KIA), motorcycles (Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Piaggio, Vespa, Harley Davidson, Triumph, Ducati), properties, mobile phones (Acer, Alcatel, Apple, Huawei,LG, Motorola, Meizu, Xiaomi,Oppo,Vivo, Samsung, Nokia, HTC, Blackberry, Sony), electronics (Television, Radio), gadgets and video games, cameras, bicycles, fashion/apparels, baby needs, sports equipment, jobs, travel, business, food and beverage, and many more..
Have you tried selling and buying second-hand and new items using ads.com.mm? Just Click – Meet – Deal!
Fix for 4.4 and earlier is back!
Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online APK Version History
Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online 1.0.6 for Android 4.1+ APK Download
Version: 1.0.6 (27) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
APK File SHA1: c8f2c668b76fc2086a3adba7a7c2f520f3ea320e
What's new: Fix for 4.4 and earlier is back!
Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online 1.0.2 for Android 4.1+ APK Download
Version: 1.0.2 (8) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
APK File SHA1: 99a1921520ef5c9f0b10ca920abf2aadba0252b4
Myanmar Samsung Font
Ads.com.mm - Myanmar Buy & Sell for Free online Tags